Ejaculatory Performance နှင့်လိင်မှုကိစ္စပါသောဆိတ်များ၏ Semen Parameters (Capra Hircus) အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု Stimulus Female (၂၀၀၃) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲ
YBOP မှတ်ချက်များ - Coolidge သည်ဆိတ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု - အမျိုးသမီးအသစ်နှင့်ထပ်မံစိတ်လှုပ်ရှားလာသည်။ ဤကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးအသစ်နှင့်အတူသုက်ပိုးအရေအတွက်တိုးပွားလာသည်။
Theriogenology ။ 2003 Jul;60(2):261-7.
Prado V ကို, Orihuela တစ်ဦးက, ဝီလိုဇာနိုက S, Perez-Leon ငါ.
လိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်လိင်ရင့်ကျက်သောဆိတ်များ၏သုတ်ရည်လက္ခဏာများအကြားဆက်စပ်မှုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ၂ နှစ်အရွယ် criollo နှစ်ကောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ခွက်တစ်ခုစီသည်အောက်ပါကုသမှုနှစ်မျိုးအနက်မှတစ်နည်းအားအခြားနည်းဖြင့်အသုံးပြုသည့် ၈ ပတ်ကြာစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကုသမှု ၁ တွင်အမျိုးသားများသည် ၄ ​​နာရီအတွင်း Estrus-induced အမျိုးသမီးနှင့်အတူတကွထိတွေ့မှုရှိခဲ့ပြီးသုတ်ရည်များကိုစုဆောင်းပြီးဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည်။ တတိယမြောက်နှင့်စတုတ္ထနာရီတွင်မတူကွဲပြားသောသမင်ကနှိုးဆွပေးသောတိရစ္ဆာန်ကိုအစားထိုးခြင်း မှလွဲ၍ ကုသမှု ၂ မှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်လေးခုအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်သုက်ပိုးအရေအတွက်စုစုပေါင်းသည်ကုသမှု ၁ နှင့် ၂ အတွက် (P <2) အတွက်ကွဲပြားခြားနားသည် (၁၈၄ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၅၂ သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်စုစုပေါင်း ၃၅၄.၃ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄၇၇.၁ ဘီလီယံသုက်ပိုး) ။
အဆိုပါ (မူရင်း) နှိုးဆွတိရစ္ဆာန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီယောက်ျားကိုပထမနှင့်နောက်ဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်နှိုင်းယှဉ်သောအခါကုသမှု2ခုနှစ်တွင်, သုက်နှုန်းစုစုပေါင်းသုက်ပိုး 0.08 +/- 4.14 ထံမှ (P = 3.8) လျော့နည်းသွား 10 မှ9(0.77) x +/- 0.7 (10 x သစ်တစ်ခုအမျိုးသမီးမိတ်ဆက်ပြီးနောက် 9), ဒီတန်ဖိုးကို 0.05 +/- 3.04 မှ) (P ကို ​​= 2.3 တိုးလာနေချိန်မှာ 10% ၏ပြန်လည်နာလန်ထူကိုယ်စားပြုသော9(67.35) x ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်သာသုံးတစ်သတ္တမဝန်ဆောင်မှုအောင်မြင်နေချိန်တွင်အားလုံးယောက်ျားမူရင်းလှုံ့ဆော်မှုတိရစ္ဆာန်နှင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအသုတ်ရည်လွှတ်အောင်မြင်။
ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတိရိစ္ဆာန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြီးနောက်အားလုံးယောက်ျားနောက်တဖန် ejaculated ။ ဒါဟာတစ်ဦး estrous အမျိုးသမီးတစ်ဦး 2-ဇစဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ပြီးနောက်လှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန်ပြောင်းလဲနေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ဆိတ်ထီးတို့ကိုထဲမှာသုက်ပိုး output ကိုတိုးပွါးကြောင်းကောက်ချက်ချသည်။